Ihe omuma: Otu esi chebe ebe gi site na akwukwo ederede
Ọtụtụ ụlọ ọrụ n'ịntanetị na-enyocha mbanye anataghị ikike. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere ebe nrụọrụ weebụn'ihi na ihe karịrị otu afọ nwere ma ọ bụ ga-enweta mkpali mbanye anataghị ikike. Nsogbu a na-etinye ọtụtụ ndị nọ n'ihe ize ndụ. Ndị na-ede blọgụ na ndị nwenke ebe nrụọrụ weebụ e-commerce kwesịrị ịkpachara anya maka mmegide mmebi iwu ndị a ma dezie ụfọdụ njehie nzuzo, nke na - akpata mgbalị ndị a mbanye anataghị ikike.Imirikiti nke intanet cyber nche na-agụnye ndị omempụ na-agbalị ịnweta ntinye n'enweghị ikike na weebụsaịtị na ịnweta ọtụtụozi, ọtụtụ n'ime ha na-agbaso ihe ndị ahịa dị ka ozi kaadị akwụmụgwọ. Ụfọdụ ndị ọzọ hackers nwere ike ịrụ iwu akwadoghị dị otú ahụdị ka iwepụta ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ iwebata usoro asọmpi na-ezighị ezi na nzụlite e-commerce - sites de hospedagem.
Otu n'ime ngwa ngwa ngwa weebụ bụ nke kachasị mbara bụ Cross-site Scripting (XSS)agha. Akpa a na-agụnye mwakpo ọgwụ mgbochi nke ndị ahịa, nke na-elekwasị anya na edemede ederede na weebụsaịtị ma ọ bụ ngwa weebụntinye ederede ziri ezi. Usoro nsogbu dị njọ na-eme ihe dị iche iche dị iche iche n'ime ahụ nke koodu yana ịchọta ihe nchọgharị onye nchọgharịKwuba na ebe nzuzo nzuzo a maara nke ọma na hacker.
Artem Abgarian, The Senior Customer Success Manager nke Ọcha ,na-enye gị uche dị iche iche ụzọ nke a java edemede na-arụ ọrụ na otú e si chebe gị na ebe nrụọrụ weebụ a ọgụ:
ọgụ na-aga na Cross-site Scripting (XSS)
N'ọnọdụ ndị ọzọ, mkpesa Cross-site Scripting (XSS) nwere ike ịchọta ihe nchọgharị niilekuki. XSS bụ usoro nhazi usoro mgbagwoju anya, ọ pụkwara ime ka ihe nchọgharị bụrụ ihe nchekwa oyi. N'ihi ya, ọ dị gị mkpa iji ihe kpatara yana ụfọdụ atụmatụ atụmatụ nke ebe nrụọrụ weebụ gị iji chedo ya na XSS.
Maka ọ bụla e-azụmahịa saịtị, ọ dị mkpa iji chebe gị na saịtị megide hacks dị otú ahụdị ka nkesa nke Cross-site Scripting (XSS). Ihe a na-eme bụ nkwekọrịta ọgwụ mgbochi nke onye ahịa, nke ọ bụghị nanị na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ dị mfeonye ọrụ njedebe. Onye nwere ike ịnwe ike ịnwe ike ịme ihe ederede na sava ahụ, nke nwere ike ime ka ha nweta ozi nzuzo. Ụfọdụ ụzọiji gbochie mbempe Cross-site Scripting (XSS) na-abịa na ntuziaka a. Ị nwere ike nwee ike ime ka ebe nrụọrụ weebụ gị si n'aka XSSwakpo ma chekwaa nche nke ndị ahịa gị megide ndị na-agba ọsọ.